Soo dejisan MAGIX Music Maker 27 – Vessoft
Soo dejisan MAGIX Music Maker
Bogga rasmiga ah: MAGIX Music Maker
MAGIX Music Kan sameeyey – software ah si ay u abuuraan music la taageero oo ka mid ah farsamooyinka casriga dhawaaqa. sofware wuxuu ka kooban yahay set badan oo ah dhawaaqyada iyo baarka kuwaas oo abuuray by fannaaniin xirfad leh. MAGIX Music Kan sameeyey waa inay awoodaan inay isku dhawaaqa duubay oo ah alaabta la blocks muusikada jira, ku dar saamaynta studio u raadkaygay abuuray iyo edit iyaga u ah baahida shakhsiyeed. MAGIX Music Kan sameeyey ayaa sidoo kale u saamaxaaya in ay ballaariso fursadaha ay muusikada u gaar ah ayadoo laga soo degsado dhawaaqyada iyo qalab dheeraad ah.
set A of noocyo ka mid ah qaybaha kala duwan
Badalidda qaabab audio iyo tafatirka ee tags ah
ka saarida Buuq iyo caadi codka
Download oo ka mid ah qalab dheeraad ah
Faallo ku saabsan MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker Xirfadaha la xiriira
Editor ayaa awood leh ee files audio ka mid ah qaabab kala duwan. Software ka kooban yahay tiro badan oo ah qalab reserved kuwan raadkaygay dhawaaqa iyo wax soo saar leh loo maqli karo ee files.
MuseScore 2.3.1 Standard iyo Portable
Virtual DJ 8.2.4291 iyo 7.4.7
Software ayaa si ay u abuuraan music studio jawabo kala duwan. Software wuxuu taageeraa set badan oo ah alaabtii muusikada oo tiro badan oo ah saamaynta dhawaaqa kala duwan.
software The si ay u abuuraan oo ka arrinsashada music on heer xirfadeed. software waxa uu isticmaalaa technology dhawaaqa sare iyo set oo ah qalab dalwaddii.
Set ka mid ah qalab loogu talagalay xisaabinta baadhis ama tiro iyo dhisidda garaafyo. Software wuxuu kuu ogol yahay in la noocyada kala duwan ee xisaabinta shaqeeyaan.
software The si aad u eegto television Streaming ka soo adduunka oo dhan. software waxaa ka mid ah kanaallada badan TV caalamiga ah iyo idaacadaha of noocyo kala duwan.